UNgizwe Mchunu nomsakazo omusha
UNGIZWE Mchunu noMfanuphetheni abazoqala ukusakaza umculo kamaskandi esiteshini somsakazo, iNgizwe Mchunu FM ezinze eThekwini, ezodlala umculo wesintu kuphela
NOKUBONGWA PHENYANE | September 9, 2019
OWAYENGUMSAKAZI woKhozi FM, uNgizwe Mchunu uthi into emenze wavula umsakazo wakhe yisililo akade esithola ebantwini selokhu kwahlukana inhloko nesixhanti phakathi kwakhe noKhozi.
NgoMgqibelo kube nesasasa ezinkundleni zokuxhumana kuvela ukuthi uNgizwe, usenesiteshi, iNgizwe Mchunu FM.
Lesi siteshi esizotholakala kwi-internet okwamanje sizoqala ukuzwakala ngoMgqibelo.
Ekhuluma neSolezwe uNgizwe, uthe bekuyiphupho lakhe lakudala ukuthi ngelinye ilanga abe nomsakazo othi yena.
“Lo msakazo uzodlala izingoma zesintu kuphela, njengoba lo mculo ngiwuthanda nami ngiyilona ibhinca futhi ngiwamele kuleli. Yingakho konke engikwenzayo ngisho ezindaweni engihamba kuzo emazweni omhlaba ngiwamela amabhinca. Ngisizwile isikhalo sawo ngase ngikhetha ukuvula lesi siteshi,” kusho uNgizwe.
Uthe okumjabulisa nakakhulu ukuthi sivulwe ngenyanga yokugubha amagugu njengoba sizogxila ezintweni zesintu.
“Isifiso sami ukuthi sifinyelele phesheya kwezilwandle, okuyinto ezokwenzeka. Okwamanje abasakazi abasekhona yimina nomsakazi weRadio DUT uMfanuphetheni. Intsha efuna ukusizakala kulo mkhakha wokusakaza umculo wesintu, uma inekhono sizokwenza konke ukuyithuthukisa. Ngeke sigcine lapho sophinde sisebenzisane nabaculi abasathuthuka kuleli emkhakheni kamaskandi,” kuchaza uNgizwe.
Uthe lesi siteshi sizinze eThekwini futhi basaxoxa ne-Icasa ukuthi bathole ilayisensi ezobenza bazwakale nasebantwini abangeke bakwazi ukungena online.
Iningi labalandeli bakamaskandi lizijabulele lezi zindaba.
UNgizwe uphinde waveza ukuthi ngoNovemba lesi siteshi uyosethula ngokusemthethweni kubalandeli bakamaskandi abayobe beyingxenye yomcimbi, ohlelwe nguye, iNgizwe Mchunu Maskandi Festival oyoba seCurries Fountain.